5 arimood oo dumarku ku qiimeeyaan raganimada | Raganimo University
5 arimood oo dumarku ku qiimeeyaan raganimada
February 8, 20192 minutes
Dad badan ayaa u haysta in raganimadu ay tahay galmada oo keliya. Balse marka la waydiiyo dumarka waxyaabaha ay ku qiimeeyaan ninka ragga ah (raganimada leh) galmadu xitaa kuma jidho kaalinta 1-aad. Dumarka waxay qiimeeyaan arimo kale oo laga yaabo in raggu aysan ku baraarugsanayn. Hadaba maxay yihiin arimahaas kale ee ay dumarku qiimeeyaan:
Dumarku waxay jecelyihiin ninka kalsoonida leh. Marka laga hadlayo kalsoonida ragga qaar waxay ku qaldaan faanka iyo isla-weynida kuwaas oo dumarku aad u necebyihiin balse kalsoonidu taas ma ahan, ee waa in ninku uu aaminsanyahay nafsadiisa iyo awoodiisa. In uu ku qanacsanyahay shaqsiyadiisa isla markaana uu leeyahay kalsooni uu wax ku qabsan karo. Haddii ay noqon lahayd hawlaha nolosha sida shaqada, waxbarashada iwm ama marka ay timaado galmada in uu yahay nin isku kalsoon.
Dumarka in loo naxariisto waxay ka midtahay waxyaabaha ay diintu na fartay. Dumarkuna aad ayay u qiimeeyaan ninka naxariista badan. Naxariista ay dumarku qiimeeyaan ma ahan oo keliya mid iyaga loo naxariisanayo balse xitaa waxay qiimeeyaan sida ninku uu ugu naxariisto dadka kale. Dumarka waa ka cararaan ninka ad-adag ee aan naxariista lahayn.
Bani'aadamka oo dhan ayaa jecel qofka dabeecada wanaagsan, dumarkuna waxyaabaha ay ku qiimeeyaan ninka raganimada leh waxaa ka mid ah dabeecad wanaaga, in uu yahay qof farxad badan oo dadka kale si fiican ula macaamili kara. In uu yahay qof bulshaawi ah oo dabeecadiisu ay soo jiidanayso dadka.
Dumarku waa qiimeeyaan ninka deeqsiga ah. Bakhiilka cidna ma jecla. Deeqsinimadu ma ahan nacasnimo oo iska bixi macno daro ah. Dumarku waa jecelyihiin ninka xasaabtama balse waxay qiimeeyaan ninka deeqsiga ah ee sadaqada bixiya, dadka baahan daryeela, qaraabadiisa iyo asxaabtiisa. Waxay qiimeeyaan ninka iyaga laftooda deeqsi u ah oo aan waxba ka hagran.
Marka laga hadlayo raganimada, galmada lagama tagi karo, waayo qeyb muhiim ah ayay ka tahay waxyaabaha ay dumarku ka doonayaan ninka in uu sariirta ku qancin karo. Ninka gacalisadiisa si fiican ugu raaxayn kara sariirta isla markaana leh calaamadaha kale ee aan kor ku soo xusnay waa nin ay u dhameystirantahay raganimo.